Ogaden News Agency (ONA) – Xukuumada TPLF oo Tabo Cusub oo Ay Shacabka Ku Xasuuqdo Latimid.
Wararka aan kahelayno galbeedka Gobolka Arsi ee dhulka Oromada ayaa sheegaya in ay ciidanka wayaanuhu halkaas ka bilaabeen tab cusub oo ay kulaynayaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan Gobolka Arsi iyo waliba
meelo kaloo Gobolka Oromiya kamid ah.
Sida ay xogtu muujinayso ciidanka kooxda TPLF ayaa samaysatay kooxo u howlgala sida loo gumaado dadka shacabka ah ee ku dhaqan guud ahaan wadanka gaar ahaan dhulka Oromada. Xogtan oo laxaqiijiyay ayaa muujinaysa in ay xukuumada wayaanuhu maalgalisay dhalinyaro ku hubaysan tooriyo, seefaf, budhadh iyo qalab kale kuwaasoo si cadaan ah ulaaya dadka ay xukuumadu u calaamadiso.
Police-ka deegaamada ay kooxahan kahowl galaan ayaa qaqabta kooxahan waxaana islamarkiiba booliiska lagu amraa in ay bilaa shuruud la’aan ku siidaayaan iyagoon lasaarin wax maxkamad ah isla markaana aan waxdambi ah lagusoo oogin. Dhalinyaradan qowlaysatada ah ee loo carbiyay in ay dadka laayaan ayaa lagu soo tababaray deegaanka lagu magacaabo Arbomaji waxaana ninkasta oo kooxdan kamid ah lasiiyaa lacag markuu qof dilo ama
dhaawaco ama weerar uu ugaystaba.
Xogtan ayaa lahelay kadib markay saraakiisha howshan u xilsaaran shaqadii ka eryeen qaar kamid ah kooxihii ay tababareen kuwaas oo shaaca kaqaaday sidii lootababaray iyo wixii loo carbiyayba. Sarkaal kamid ah kuwa dhibaatooyinkan kadambeeya oo lagu magacaabo Bakir Shale ayaa isku dayay in uu difaaco ee daymaha xukuumada TPLF loosoo jeediyay wuxuuna qabtay shirar uu doonayay in uu dadka ku marin habaabiyo wuxuuse isku daygaasu kudhamaaday guul daro iyo waji gabax.
Sidoo kale Bakir Shale ayaa isku dayay in uu indhaha shacabka meel kale ujeediyo isagoo ku andacooday in ay dilalkan ka dambeeyaan dad qaab diimeed isu raad sanaya iyo arimo qabiil balse sheegashooyinkaas oo dhan ayaa noqday hal bacaad lagu lisay.
Ilaa iyo hada waxaa falalkan isdaba jooga ah lagu dilay 12 qof oo ahaa dadka shacabka ka dhex muuqda waxayna
kooxdu bartilmaameed ka dhigataa dadka kurka u ah bulshada. Qaar kamid ah dadkii dilalkii ugu dambeeyay gaystay oo ay shacabku qabteen ayay diideen in ay booliiska ku wareejiyeen iyagoo ku eedeeyay in ay si dag dag ah usiidaynayaan intay dhaqaale hor leh siiyaan.
Sikastaba ha ahaatee qalalaasihii mudada dheer ka socday gobolka Oromia ayaa yeeshay wajiyo cusub waxayna
xukuumada siiliicaysa ee wayaanuhu ku dadaalaysaa in ay quusiyaan shucuubta ku kacsan balse shacabka ayaa dhibaatooyinka loogaysto kasii qaada cadho iyo dardar hor leh.